About us - Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd.
Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd.
I-LINQING XINRI PRECISION BEaring CO., LTD ingumkhiqizi womndeni okhethekile okhiqizayo kusukela ngonyaka ka-2006. Ifilosofi yethu: ukuzuza ukwethembeka ngokwethembeka, ukunqoba ngekhwalithi, ukuthuthuka ngokwenza izinto ezintsha, futhi sizenzele amathuba ethu ngomoya omangalisayo.
Lezi zici zisisebenzele kahle, zathola i-XRL idumela eliqinile phakathi kozakwethu abathembekile namakhasimende. Ngenxa yalokhu, iXRL CO., Inenethiwekhi yokuthengisa nokusabalalisa esungulwe kahle kepha ekhula ngokushesha, ngaphakathi nangaphandle.
Ngokuthengiswa konyaka kwamazwe angaphezu kwamadola ayizigidi ezingama-150 zamadola aseMelika kanye namandla asendlini angaphezulu kwamasethi angaphezu kwezigidi ezingama-7000, ezikhungweni ezingamamitha ayisikwele angaphezu kwezigidi ezi-2, iXRL ingomunye wabakhiqizi abakhulu abakhiqizayo emhlabeni. Eqinisweni, iXRL isivele ithengiswa emazweni angaphezu kwe-120 emhlabeni jikelele. Kungaba ezolimo, ukukhiqizwa kwendwangu, ukumbiwa kwezimayini, ukuphrinta izinhlelo ezahlukahlukene ezikhumulweni zezindiza, ezinhlelweni zokupholisa umoya, ukuhambisa amadivayisi, ukuthumela isiteshi samandla, ithoyizi noma okokusebenza kwezokwelapha, i-Automobile, i-XRL akumele okungaphansi kwenani eliphakeme kakhulu lesigaba semakethe esiphakathi nendawo. . Okwamanje, i-XRL nayo yaziwa nge-top-notch, iyaphendula, 24/7/365 service - wonke ama-imeyili namavoyisimeyili aphendulwa kungakapheli amahora ayisithupha, aqinisekisiwe!
Sinabasebenzi abaqeqeshiwe okufanele basebenze. Futhi singakwazi ngokuvumelana nemidwebo yakho noma izidingo zakho zokukhiqiza okwenziwe ngokwezifiso.
Insizakalo enhle emva kokudayiswa: (Iwaranti yekhwalithi yezinyanga eziyi-12, imali ingadonswa noma ibuyiselwe imali uma kukhona inkinga yekhwalithi ngaphansi kwesimo esivamile sokusebenzisa).
Inkonzo ye-OEM / eyenziwe ngezifiso iyamukelwa.
Ukuxhaswa kwamahora we-7X24 ngocingo noma ubuchwepheshe be-inthanethi mahhala.
(1) Sinemishini yokuhlola esezingeni lokuqala ukuthola ukuthwala imingcele ehlukahlukene yedatha nokulawula ikhwalithi yokuthwala.
Noma kunini lapho amabombo kufanele aqale atholakale ukuthi ikhwalithi iyafaneleka yini nokuthi ukuthwala okungafaneleki kuzosuswa ngqo.
Ngakho-ke singathola ukwethenjwa kwamakhasimende amakhulu, futhi siwanikeze iminyaka eminingana.
(2) Sinamakhono ethu we-R & D, ukusiza amakhasimende ukuxazulula inkinga yamabheringi angajwayelekile.
Futhi singakwazi ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukushintsha uphawu lwabo.
(3) Intengo, ukukhiqizwa kwethu kuqinisekisa ukuthi amanani ethu kulo lonke elaseChina ancintisana impela.
Kungcono kuwe ukuqhathanisa amanani nekhwalithi phakathi kwabahlinzeki.
Kepha wonke umuntu uyazi ukuthi awukwazi ukuthenga imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngentengo ephansi kakhulu,
kodwa umkhiqizo wethu ikhwalithi engcono kakhulu uma usebenzisa inani elilinganayo.
(4) Ikhwalithi yokuthwala i-XRL: iphakeme kune-ISO ejwayelekile: 9001 ne-Gost.
Sinemishini yokugaya ezenzakalelayo ngokuphelele kanye nolayini bomhlangano ngemishini yokuhlola ezenzakalelayo ngokuphelele eyenza ikhwalithi yamabhere ibe phezulu kakhulu. Senza amabheringi ayi-100% ahlolwe.
ubuchwepheshe obubandayo bokugoqa obubandayo bokuguqula inqubo obuthuthukisa amandla wokuthwala amasongo nempilo ethwalayo ngokwenza ngcono isakhiwo sayo sensimbi kanye nensimbi yokulandela umugqa.
Futhi ubuchwepheshe bethu obusha obuthambile be-nitriding bendandatho yangaphakathi nangaphandle kanye nezinyoni ezenza ukusebenza okungcono nokuphila isikhathi eside kwamabhere ethu.
Isiqubulo siza lapha
Ukuze ube ngumkhiqizo onguNo. Embonini ye-Bearing Industry
Yakha ibhizinisi elidume umhlaba wonke futhi Dala i-globle top-notch brand yaseChina
Ukuphikelela Njalo ngekhwalithi ephezulu, ukuthinta kanye namanani entengo anengqondo
Amakhono & Ubungcweti Bethu
1. Zonke izinqubo ezikhiqizayo, njengokufaka, ukuguqula, ukwelapha ukushisa, ukugaya, ukuhlanganisa nokupakisha, sekuphelile ku-manufactory yethu. Kungakho i-XRL Bearing ingakunikeza ngokunemba kwebhola nama-roller bearings ngamanani aphansi kakhulu futhi ingahlangabezana nokulethwa ngesikhathi.
2.As i-ISO9001: 2000 umkhiqizi oqinisekisiwe, sasisungule uhlelo lokulandelela umkhiqizo. Ngaphandle kwalokho, i-XRL Co., ineqembu eliqinile lobuchwepheshe nonjiniyela waseJapan ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ekusetshenzisweni nasekusebenziseni amabhere ethu.
Imishini yokusebenza ngensimbi
Sinikeza uhla oluphelele lwamabombo kufaka phakathi amabombo we-Tapered roller, amabombo we-groove ball, amabombo we-pillow block, ama-cylindrical roller bearings, ama-Spherical roller bearings, amabombo we-Spherical bearings, amabombo we-Wheel hub namanye.
Kungani usebenzelana nathi?
1. Sinemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme ukuthola ukuthwala imingcele ehlukahlukene yedatha nokulawula ikhwalithi yokuthwala.
2. Sinamakhono ethu we-R & D, ukusiza amakhasimende ukuxazulula inkinga yamabheringi angajwayelekile.
Lapho thina ukuthekelisa?
Ngaphandle kokuthengiswa kwasekhaya, ukuthwala kwe-XRL sekuvele kuthunyelwe emazweni angaphezu kwezi-120 kanye nezifunda zaphesheya kwezilwandle kubandakanya iJapan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, United States, Canada, Mexico njll.